mailung khola jalvidhyut company limited(mailung khola jalvidhyut company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सेयर आज बुधबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार खुलेको छ। नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि यो कम्पनीले ९५.७५ रुपैयाँदेखि २८७.२५ रुपैयाँ ओपनिङ रेन्ज तोकेको छ। स्पेसल प्रि–ओपन सेसनमा सोही रेन्जभित्र यो कम्पनीको सेयर किनबेच भएपछि कारोबार खुलेको हो। पहिलो कारोबार १८६.५ रुपैयाँमा भएको...
मैलुङ खोला जलविद्युतको सेयर भोलिबाट कारोबारमा आउने, ओपनिङ रेन्ज कति ?
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सेयर भोलि असोज ६ गतेबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ। यो कम्पनीको सेयर (आईपीओ) आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ। कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको दोस्रो दिनबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने गरेको छ। नेप्सेमा मैलुङ खोला...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ आज मंगलबार बाँडफाँड गरिएको छ। काठमाण्डौको नक्सालस्थित नारायणचौमा रहेको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा बिहान ९ बजे एक कार्यक्रमबीच मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। कम्पनीले गत साउन १४ गतेबाट प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ भोलि मंगलबार गरिने भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ बिहान ९ बजे बाँडफाँड गरिनेछ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम सिद्धार्थ क्यापिटलकै काठमाण्डौको नक्सालस्थित नारायणचौरमा रहेको कार्यालयमा गरिनेछ। कम्पनीले गत साउनबाट �...
मैलुङ खोलाको आईपीओमा मागभन्दा ४१.६८ गुणा बढी आवेदन, कतिले भरे ?
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा ४१.६८ गुणा बढी आवेदन परेको छ। कम्पनीले गत साउन १४ गतेदेखि १०० अंकित मूल्य दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ।कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने १४ हजार ७२६ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ५ प्रतिशतले हुन आउने ३६ हजार ८१४ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने समय डेढ घन्टा थपिएको छ। सरकारको एकीकृत तथ्यांक केन्द्र विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा अवरुद्ध बनेका कारण हिजो दिउँसोबाट सीडीएससीको मेरो सेयरमा समस्या देखिएको थियो। जसका कारण हिजो दिउँसो ३ः३० बजेदेखि मैलुङ खोलाको आईपीओमा आवेदन दिने कार्य अवरुद्ध बनेको थियो। हिजो ५...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज साउन १८ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत साउन १४ गतेबाट यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। आज बैंकिङ समयसम्म यो आईपीओमा आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीले...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आइतबार साँझसम्म मागभन्दा ३५.३१ गुणा बढी आवेदन परेको छ। गत साउन १४ गतेबाट यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा पहिलो दिन नै १० गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। आज साउन १४ गतेबाट यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल �...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आज साउन १४ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने १४ हजार...
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले भोलिसाउन १४ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन...
साउन १४ बाट मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन खुल्ने
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले यही साउन १४ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। कुल कित्तामध्ये २...
मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बढीको आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिजो असार २३ गते मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो। धितोपत्र बोर्डको अनुमतिसँगै अब मैलुङ खोला जलविद्युतले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ...